Haziri ma wuru na a ọkachamara na kediegwu otú iDVD enye n'elu 100+ gburugburu ka ọrụ nke mere na ha nwere ike inwe ọrụ mere na a classy ụzọ. Ụfọdụ gburugburu na-akwado ike anya na-aga aga na-eme ka a oru ngo a fun jupụtara ọrụ mgbe ndị nke ọzọ ekwe ka onye ọrụ na-enye a ọkachamara aka ka oru ngo nke dị n'okpuru nkwadebe. Ọ bụla ọ bụ bụ iDVD bụ otu n'ime ụzọ kasị mma iji hụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe pụta na mmekọrita video edezi. The iDVD gburugburu na-ụzọ kasị mma iji hụ na ya pụta na akara na onye ọrụ chọrọ.
Atụmatụ nke iDVD gburugburu
E nwere ụfọdụ atụmatụ nke iDVD gburugburu nke ọrụ na-eji na mmekọrita oru ngo ma ka ha na-amaghị nke zuru ezu Njirimara. Ọ bụ uru na banyere na iDVD gburugburu ike-eji naanị na software onwe ya ma ha nwekwara ike-etinyere nke ọzọ Apple ike software omume dị otú ahụ dị ka iMovie. The ụdị nke gburugburu nwekwara dị iche iche na maka otu ihe ahụ ha na-aga aga nakwa dị ka ederede ma ọ bụ ọkachamara ụdị ike otu anya dị ka onye ọrụ na-achọ. The iDVD gburugburu abịa na iDVD omume na e arụnyere si iLife CD ma gburugburu nwekwara ike ahaziri dị ka kwa mkpa na-achọ n'aka ndị ọrụ nke mere na mkpa ha na-achọ n'aka na-zutere na zuru. The iLife DVD nwekwara ike-eji iji wụnye gburugburu nke usoro ihe omume naanị. Ihe atụ ma ọ bụrụ na onye ọrụ bụ mgbe iDVD 7 gburugburu mgbe ahụ ihe a chọrọ bụ iji hụ na DVD ịtinye na ọhụrụ version nke iDVD na e arụnyere jupụtara elu na gburugburu na-abịa site iDVD 7 ma ọ bụ ọbụna ihe ọ bụla okenye version. Onye ọrụ nwekwara ike troubleshoot na iDVD gburugburu abịa ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị arụ ọrụ ma na-emezu nzube nke ya e wuru. Ndị kasị mma na ndị kasị elu nchọpụta nsogbu nduzi na ndị dị ugbu online nwekwara ike-enyoba iji hụ na ya pụta na-enweta ga-dozie nsogbu ahụ na zuru.
Basics nke iDVD isiokwu download
E nwere ihe abụọ dị iche iche nke ọrụ na ike ga-eji na mmekọrita na isiokwu. Onye mbụ bụ na eziokwu ahụ bụ na iDVD abịa na free gburugburu wuru na mkpọ na ọ ga-eji iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mmekọrita na gburugburu na-agbanwe agbanwe na download. The abụọ nhọrọ bụ iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye saịtị adreesị nke awade free gburugburu na saịtị ahụ nwere ike-ahụ na-eji saịtị ibudata gburugburu n'efu. E nwere ihe ọzọ nhọrọ nke nwere ike ga-eji na ọ na-banyere weebụsaịtị na-ana ego iji nye ahaziri themes. Ọ bụrụ na onye ọrụ dị njikere na-emefu ego iji na-enweta n'ozuzu arụmọrụ enwekwukwa mgbe ahụ nke atọ nhọrọ nwekwara ike-etinyere na-arụpụta ihe kasị mma n'ozuzu.
Nkebi nke 1: Olee otú ibudata iDVD gburugburu?
Iji budata iDVD gburugburu onye ọrụ kwesịrị ka-eso usoro nke e kwuru ka n'okpuru iji hụ na ya pụta na mma mma na klas na-eme. Usoro a nwere ike etinyere ibudata iDVD gburugburu maka ọhụrụ oru ngo na-eme ka ọ na-eji iDVD. Ọ bụkwa otu nke kasị mma ụzọ iji na-enweta iDVD gburugburu maka anwansi iDVD na otu nzọụkwụ DVD oru ngo:
Ozugbo iDVD arụnyere onye ọrụ kwesịrị ka imepụta ọhụrụ oru ngo nke mere na mkpa mkparịta ụka igbe ma ọ bụ interface-egosi:
The gburugburu ngalaba bụ mgbe ahụ ka a ga-enweta ugbu a ele ndị niile na themes. Nke a nwekwara ike mere site na-ahọpụta niile si dobe ala menu na nke a:
Ka anya dị ka isiokwu na-ahọrọ na pịrị ọ na-gwara ka soro ntuziaka na mkparịta ụka igbe nke ga-adị ọzọ. The mbụ nhọrọ bụ nke na nbudata na isiokwu na onye ọrụ nwere iji họrọ ya na pịa OK ibudata isiokwu na rụchaa usoro na zuru:
Part 2: Olee hazie iDVD gburugburu?
Iji mee ka ojiji nke iDVD gburugburu dị ka kwa ọchịchọ ọ na-gwara na-eso usoro na e kwuru n'okpuru iji nweta nsonaazụ na-achọrọ na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na customizing iDVD gburugburu bụ nnọọ mfe ọrụ ịrụ na onye ọrụ nwere ike hụ na nzube na-ebu n'obi tupu edezi na-eme.
Ederede ngọngọ a ga-dezie bụ na-pịrị ikpughe zoro ezo menu. The menu, formatting na ederede ga-agbanwe ka kwa mkpa na ọchịchọ:
Site menu nguzo naanị ederede nwekwara ike gbanwere iji nweta na-aga na-edezi nke isiokwu na nke a:
Ezinụlọ, ụdị ihu na size igbe nwere ike iji ike ọhụrụ font, agba nakwa dị ka size nke isiokwu:
Ịgbanwe isiokwu azụ mbụ onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na ederede ngọngọ n'okpuru ajụjụ a pịrị na needful a mere na nke a:
Nkebi nke 3: 5 iDVD FAQ si
Na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime FAQ metụtara iDVD ndị a ga-atụle site onye ọrụ na nke a:
Olee otú ịmepụta otu ISO disk Onyonyo iji iDVD?
Ozugbo ọhụrụ oru ngo e kere onye ọrụ nwere ike ịgbanwe ndọtị nke .img ka .iso mezue usoro na ike ISO faịlụ site na iji iDVD:
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na iDVD ọkụ na mberede na-akwụsị?
The iDVD bụghị e wuru iji na-akwado DVD na-enwu. A dị iche iche ihe omume dị otú ahụ dị ka iMovie bụ ka e jiri ya mezue usoro na zuru. Ọ nwere ike na na-eji ọkụ nke ihe nkiri na Mac HD maka Michael na mgbe ahụ iji mgbe ahụ na-eme n'ọdịnihu Ozugbo oru ngo e dechara.
Olee otú m nwere wụnye iDVD ka Yosemite OSX dị ka ọ na-adịghị na-akwado ya?
Usoro bụ pụtara dị mfe. Onye ọrụ dị nnọọ mkpa iji wụnye iLife nke nwere okenye mbipute nke iDVD ihe atụ iDVD 7 mezue usoro na zuru. Naanị ndị okenye version ga dozie nsogbu ahụ na Yosemite.
Olee otú m nwere tinye media ka ngosi mmịfe na a na-kere iji iDVD?
Ozugbo foto na-dọkpụụrụ na ama esịn ka isi panel ọ na-gwara gaa nri panel ma họrọ mgbasa ozi. The format dị ka kwa oke nwere ike mgbe ahụ-atụkwasịkwara anọgide na-oru ngo.
Olee otú m na-eji Magic iDVD ọrụ si ọhụrụ oru ngo interface?
The Magic iDVD ọrụ na-enye ohere onye ọrụ iji họrọ isiokwu nakwa dị ka photos ndị a ga-atụkwasịkwara oru ngo. Isi interface nke ọhụrụ oru ngo a ka ghọtara na enyemaka nke foto n'okpuru:
> Resource> DVD> 8 Atụmatụ maka ị jide iDVD gburugburu